नेपालीहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा–अधिक चिसो पानी पिउँदा यस्ता समस्या देखिने गर्छन् - IAUA
नेपालीहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा–अधिक चिसो पानी पिउँदा यस्ता समस्या देखिने गर्छन्
ramkrishna October 15, 2017	नेपालीहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा–अधिक चिसो पानी पिउँदा यस्ता समस्या देखिने गर्छन्
एजेन्सी । शरिरमा केही समस्या देखिएमा चिकित्सकहरुको सुझाव हुन्छ पानी धेरै पिउनुहोस् । दिनमा ८ गिलासभन्दा बढी पानी पिउनुपर्छ । यसले पाचनप्रणालीमा राम्रो बनाउन काम गर्छ, छाला तथा कपाल स्वस्थ राख्छ ।
पानीले शरिरमा रहेको अनावश्यक पदार्थहरु बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । तर, गर्मी लाग्ने बित्तिकै मानिसहरु धेरै चिसो पानी पिउने गर्छन् भने जाडोमा पनि धेरै चिसोको पानी नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ । जबकी धेरै चिसो पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन । धेरै चिसो पानीले पित्तासयलाई हानी गर्ने काम गर्छ । चिसो पानीले भविष्यमा यस्ता समस्याहरु पैदा गर्ने काम गर्छ ।
चिसो पानीले मललाई जमाउने काम गर्छ । यसकारण पाचनप्रणालीमा यसले समस्या पैदा गर्ने काम गर्छ । मललाई राम्रोसँग नसर्दा शरिरले स्वस्थ भएको अनुभव गर्न पाउँदैन । यसैका कारण अन्य रोगको कारण पनि बन्न सक्छ
२. मुटु सम्बन्धि रोग
चिसो पानीका कारण ब्लड नभ्र्स सिकुड हुन्छ । मुटुलाई रगत प्रवाह गर्नका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । यसका कारण मुटुमा जोर पर्ने गर्छ । मुटुको धड्कनमा समस्या देखिन थाल्छ । यसका कारण हाइ ब्लडप्रेशर हुने वा हार्टअट्याक समेत हुने गर्छ ।
३. तौल बढ्ने
खाने खाने बित्तिकै तुरुन्त चिसो पानी पिउनाले पाचनप्रणालीलाई समस्या पार्छ । यसका कारण हाम्रो मेटाबालिज्ममा नराम्रो असर पार्ने काम गर्छ । शरिरमा बोसो समेत जम्न थाल्छ ।
४. पाचन समस्या
चिसो पानी पिउनाले शरिरको नभ्र्स सिकुड हुन्छ । यसका कारण पाचनप्रणाली कमजोर हुनेगर्छ । कब्जियत, नराम्रो डकार र एसिडिटी हुन जान्छ ।
५. पोषकतत्वको कमी हुन्छ
जब तपाई चिसो पानी पिउनुहुन्छ यसले खाएको खाना जमाउने काम गर्छ । शरिरमा अन्य कामका लागि धेरै उर्जा खर्च हुनेगर्छ । यो उर्जा खाने गरेको भोजनबाट प्राप्त हुनेगर्छ । तर, पेटमा खाना जमेपछि आवश्यक उर्जा शरिरले पाउन सक्दैन ।
६. टाउको दुख्ने गर्छ
चिसो पानी पिउनाले शरिरको तापक्रम अचानक परिवर्तन हुन्छ । यसको असर सिधा दिमागमा पर्ने गर्छ । यसका कारण टाउको दुख्ने गर्छ ।
७. छाती दुख्ने गर्छ
गर्मीमा बाहिरबाट आएर एक्कासी चिसो पानी पिउँदा यसले शरिरको तापक्रममा घटाउने गर्छ । यसले छातीमा कफ जमाउने काम गर्छ । यसका कारण घाँटी दुख्ने समेत गर्छ ।
Previous Previous post: आँखाको नानी खैरो हुने ब्यक्ति प्रभावशाली, अरु के हुने मानिस कस्तो ?
Next Next post: ७ दिन सम्म यसो गर्नुस्, कहिले पैसाको कमि हुने छैन